Tokony ho fantatra alohan'ny miantsena ho Hoverboard - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Amin'ny avo-teknolojia tena mahay mampifandanja teknika, avo roa heny fiovaovantsika amin'ny naorina-in gyroscope sy ny fahamaotinana sensor, tena mora ny fandrindràna, fotsiny manova matavy ianao, lanja fo, ny scooter dia flexibly hamindra mialoha, niamboho, ankavia, havanana, ary na dia miverena 360 diplaoma in ny toerana. Ny iray amin'ireo tsara indrindra endri-javatra io ianao scooter no mampifandray izany amin'ny alalan'ny finday fampiharana Bluetooth. Raha izany no izy, dia mila nifidy ny vokatra mahomby indrindra izay tsy mbola tonga handiso fanantenana anao momba ny ny manao. Ankehitriny, tsy manana ho tezitra ny amin'ny bateria. Koowheel hoverboard bateria dia tena mateza, toy ny K3 tena mahay mampifandanja scooter, ny bateria dia 18650 ambony karazana fahombiazana bateria sela, dia 1500 eo ho eo ny fiainana tsingerina.
Tsy hanenina miantsena ho an'ny Powerboard amin'ny Self ny mampifandanja ny 2 Wheel Electric Scooter mihitsy aza raha vao ary Faly aho manohana azy io. Ny Self ny mampifandanja ny Scooter K3 amin'ny fahaiza-fiovaovantsika Board amin'ny KOOWHEEL manana betsaka manontolo ny fahefana mba hitsambikina eo na 18-degeee hantsana avy any, dia hamela anao hahatratra avo vaovao avy hatrany. Mitaingina dia mahafinaritra, na dia Tsapako hoe toy ny mitaingina fandihizana, ka jereo izao indray toy ny kilalao ny ankizy noho ny teknika ny fitaterana. Ny fanampiny ianao na miankina niamboho forwards, ny ambony ny hafainganam-pandehan'ny milina.
Izany dia manapa-kevitra tsara ho an'ny mpampiasa ny sokajin-taona rehetra. Mety tsy ho toy ny fomba mahomby-antsoina hoe ny 2 tena mahay mampifandanja môtô ambony na izany aza dia tsy ho voafitaka, dia vao ho tsara tarehy be. Koowheel K3 kodia roa tena mahay mampifandanja herinaratra scooter no hitombo ho fitaovana ilaina mba hahatonga ny fitsaboana mifindra haingana amin'ny vondrona isan-karazany sy ny heriny ampy. Ka inona no mahatonga ny Koowheel Electric Scooter izany manokana? Amin'ny lafin-javatra rehetra ao aminy fa niresaka momba sy ny vidiny, dia azo antoka fa "mandeha tsara amin'izao fotoana izao ary haka azy io hoe" scooter. Mety ho zavatra iray ianao dia manontany tena ankehitriny, fa Noely sy ny fialan-tsasatra izay no lasa. Powerboard avy Hoverboard no farany tena mahay mampifandanja scooter izay mety ho vola zavatra namana izay tonga miaraka amin'ny safidy tsara indrindra mba hanana ny teny farany traikefa amin'ny nitaingina izany. Na izany aza, miaraka amin'ny tendron'ny ravin manaraka ity, nifidy ny tsara indrindra dia tsy maintsy hoe nandeha tao amin'ny zaridainam-panjakana ..
Ny herinaratra mandanjalanja tena scooter mampiasa gyroscope mba tamim-pahendrena mifehy ny fahamarinan-toerana. Mitarika tsikelikely ho amin'ny kambana maotera angovo, ny vaovao Koowheel herinaratra scooter Heverina ho iray amin'ireo ambony rehetra-lalana "hoverboards" eny an-tsena hahazoana ny Max haingana ny 8MPH sy 20 degre manatrika ilay havoana. Segway dia singlehandedly tompon'andraikitra ny popularization ny hevitra kodiaran-droa, tena mahay mampifandanja, bateria-Powered fiara elektrika.
Post fotoana: Jan-19-2018